Shasha nekuda mboro yakatanga kuti aaaa ndati nhasi ndifurwe zvangu nemhepo mukoma wenyu aenda kumusha nembeu kudai saka ndakapfeka so musatya henyu. Anotodzoka zvake after 3 weeks bkz anoda kusiya abatsira vana amai kurima.
Ndakaseka zvangu nechemumoyo ndokudzokera muden kundoona kuti macondom how far ndikaona mune 5 ndobva ndadzokera
munosvirisa vo imi. Pose pamunosvira ndinenge ndakagara pahwindo penyu ndichinzwa vasikana vachichemerera.
Ndakanguva ndanzwa nemoyo mufunge henyu. Mukoma wenyu ihuku chaiyo haaagone kusvira uyu aaaaa” Ndakapinda muden bkz mboro yanga yorwadza nekumira ndokutanga zvangu kubika bika tu rice twangu fro 6-7pm. Ndakatyora muden kusvika
Ichinyenama nyenama so ndikaziva yaaaaaa shasha yanakirwa nesize yemboro. Takazombotaura here veduwe ndakatanga zvangu kuKISWA. Vakomana kune vanhu vanokisa vakomana zvinonyerekedza so kuita kunge uri kusvozva mboro iwe uchikiswa pamuromo chaipo.
Ndakatanga zvanguwo ndokupinza ruoko mukaskin tyt kavo baba ndokutanga kutamba neka beans kavo baba. Ndakaona zimhoms richizvongonyoka so senyoka yarohwa musoro ndikaziva kuti eeee zviri kuifambira. Ndakatanga kupinza zvigunwe mukati mayo ndichiiita zvishomanana ndopandakanzwa mhoms yosuririra ndikaziva yanakirwa zvangu.
Uuuuuuuu ndakaona shasha yondibvisa hembe yangu neTROUSE ndikaziva kuti zishondoooooooo ndorava kudiwa hapana chimwe apa. Varume hama ndakapfeka CONDOM rangu pazimboro rakamira ndikaona ziso ramai ava
Ndakawedzera speed yangu yekukoira baba ndichiiita kunge spring so kuti zvomo nyaaaa zvomo nyaaaaa zvomo nyaaaa. Baba mai yaitiii chemerere chemerere yomboti ziiiii kwekanguva so. Ndakaramba ndichisviiira so ndikazonzwa shaaaaa yatai ziiiiiiii ndikaziva kuti eeeee yatunda manje. Takazorora kwekangauva kadiki so ndobva ndatanga nayo romance.
Mai ine zemo riiri pahuma chaipo in less than 5 minutes yanga yoda futi. Ndakapfeka rimwe condomu baba ndokufongoresa zvangu. Baba kune vakadzi vanogona kufongora kwete zvenyu zvana Noreen. Vakomanaka ndakapinza mboro yangu yose baba ndokutanga nespeed yakapenga zvangu ndichisvira amai Tino. Uuuuuun kusura kwemunhu mudhafu kunonakidza akomana uuu.
PREVIOUS POST Previous post: Mukadzi wemunhu anonaka varume eishhh
NEXT POST Next post: Chinzwa kudya kwandakazoita beche ex wangu auya kusleepover